अन्तत: सन्दिपले पाए अमेरिकाको भिसा
२८ श्रावण २०७६, मंगलवार १४:२८
नेपाली युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई अमेरिकी दूतावासले भिसा ‘रिभ्यु’ का लागि फेरि बोलाएपछि अन्तत: भिसा दिएको छ । मंगलबार बिहान अमेरिकी दूतावासले भिसा दिन अस्वीकार गरेपछि सन्दीपले ट्वितमार्फत गुनासो गरेका थिए । उनले अमेरिकी दूतावाससहित परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, हेलो सरकारलाई ट्विट मेन्सन गरेका थिए । त्यस लगतै अमेरिकी दूतावासले सन्दिप लाई बोलाएर अमेरिकाको भिसा दिएको छ ।
नेपाली रास्ट्रिय क्रिकेट टोलीका व्यवस्थापक रमन सिवाकोटीले मिडियामा दिएको जानकारी अनुसार सन्दिपले भिसा पाएका छन् तर दुतावास भित्र के कुरा भयो भन्ने विषयमा अहिले बोलेका छैनन् । भिसाको लागि दुताबासका कर्मचारीले सन्दिपलाई किन बोलाए र अहिले किन भिसा दिए भन्ने विषयमा सिवाकोटीले केहि जानकारी दिएका छैनन् भने सन्दिप अहिले सम्पर्कमा आउन सकेका छैनन् । सामाजिक संजालमा भिसा नदिएको विषय लाई लिएर चर्को आलोचना समेत भएको थियो ।
सेप्टेम्बर चारबाट वेस्ट इण्डिजमा आयोजना हुने क्यारेबियन प्रिमिएर लिगका लागि सन्दिपले भिसाको लागि आवेदन दिएका थिए । सन्दीपले खेलाडीका रूपमा आफूलाई भिसा दिन सहयोग गरिदिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई आग्रह गरेका थिए । सन्दीप अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली क्रिकेटर हुन् । उनले एकै वर्षमा नौ देशमा क्रिकेट क्लबबाट खेलिसकेका छन् । भर्खरै उनी क्यानडा लिग खेलेर नेपाल फर्केका हुन् । सन्दीपले भारत, पाकिस्तान, अस्ट्रेलिया, वेस्टइन्डिजलगायतका देशमा क्रिकेट खेलिसकेका छन् ।
याे पनि पढ्नुहाेस् : सन्दीप लामिछानेलाई अमेरिकाले दिएन भिसा, भन्छन्, दूतावासको निर्णयले आश्चर्यमा परें
रवीन्द्र मिश्रले भने– ‘सन्दीप लामिछानेले अमेरिकाको भिसा नपाउनु देशकै अपमान हो’
सन्दीप लामिछानेलाई बोलायो अमेरिकी दूतावासले, रमन शिवाकोटीसहित पुगे महाराजगन्ज
रेन्नेससँग पीएसजी पराजित
रोनाल्डोबिना खेलेको युभेन्ट्सलाई डिबालाले जिताए
ला लिगा : सेल्टा भिगोमाथि रियलको सानदार जित
बार्सिलोना ला लिगाको पहिलो खेलमै बिल्वाओसँग पराजित
यसकारण कप्तान लियोनेल मेस्सीले ला लिगाको पहिलो खेल गुमाउने
उपचारका लागि सिंगापुर जानुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाए सर्वदलीय बैठक
३ भाद्र २०७६, मंगलवार ०९:५६
‘द रक’ले गरे यी सुन्दरीसँग दोस्रो विवाह, को हुन् उनी ?
आजको मौसम : कहाँ कहाँ पर्दैछ पानी ?
नेतृत्व तहबाटै असहयोग भएपछि प्रभु साहले दिए नेकपा प्रदेश २ को अध्यक्ष पदबाट राजीनामा